Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀)
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ကဘာလဲ။
Generic Name: Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Benda 500 ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ –
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Benda 500 ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးပမာဏ အချိန်အတိုင်း သောက်ပါ။
Benda 500 အားမသုံးခင် ဆေးအညွှန်းကို ဖတ်ပါ။
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Benda 500 ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Benda 500 ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Benda 500 ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Benda 500 အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Benda 500 အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိနေလျှင် Benda 500 အား မသုံးခင် ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း – Benda 500 ၊ ၎င်းတွင်းပါသော ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်လျှင်၊ ထိုပစ္စည်းများကို အညွှွန်းစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။.
Benda 500el နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သည့် တခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ဥပမာ – ခရွန်းရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အနာဖြစ်ပြီး အူမကြီးရောင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ပင် Benda 500 တွင်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်တာရှားပြီး နောက်ထပ်ကုသမှုခံရသည်အထိ မဖြစ်ပါ။ သို့သော် သင့်၌ဆေးသောက်ပြီးနောက် ပြဿနာများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုတင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Benda 500 သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဥပမာ phenytoin (Dilantin), ethotoin (Peganone), mephenytoin (Mesantoin), and carbamazepine (Tegretol) တို့သည် mebendazole ၏ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ အထက်ပါဆေးများ သောက်နေသည်ဆိုပါက ဆရာဝန်အားပြောပါ။ ထိုမှသာ ကုထုံးကို ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Benda 500 က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Benda 500 ပမာဏမှပါတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Benda 500® (ဘန်ဒါ ၅၀၀) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Benda 500 ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Benda 500 ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။